God Theatre Water Festival – Amazing Yangon
God Theatre Water Festival
Home /Event/God Theatre Water Festival
ကဲ Rock အမျိုးတို့ရေ …… 💦 သင်္ကြန် (၄) ရက်တာလုံးကို ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ Rock ဂီတ၊ ကိုယ်အားပေးတဲ့ Idol artist ရင်ဘတ်ချင်းနီးတဲ့ဘော်ဒါအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းကြရအောင်လားဗျာ 🎭
ဒီ တစ်ခါမှာတော့ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတို့အတွက် God’s Theatre မဏ္ဍပ်လက်မှတ်တွေ ယူဆောင်လာပါပြီ… 📢
God’s Theatre မှာတော့ Rocker ကြီးတွေအတွက် အလွတ်ကဲလို့ရမယ့် နေရာ မဏ္ဍပ်အပြင်အဆင်တွေ စားသောက်တန်းတွေ စုံလင်စွာပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်…
နောက်ထပ် ထူးခြားတာကတော့ God’s Theatre မှာ Zeus, Poseidon, Hermes ဆိုပြီးတော့ လက်မှတ်အမျိုးအစား (၃) မျိုးခွဲထားပါတယ်…
တေးသံရှင် AUNG LA, Raymon, Fokker တို့က အမိုက်စားသံစဉ်တွေနဲ့တူတူ ရှိနေမှာပါ…
မဲဖောက်ပေးမှာကတော့ Poseidon (5) Tickets နဲ့ Hermes (6) Tickets တို့ဖြစ်ပါတယ်… အများကြီးပဲနော်…
🚩 B&F Weekly Promotions Page ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်း လိုက်ခ် ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်…
🚩 ဒီ Post လေးကိုလည်း Public နှင့် ရှဲလ် ပေးရပါမယ်…
🚩 နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ မိမိတူတူသွားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း (၃) ယောက်ကိုလည်း Mention ခေါ်ပေးရပါမယ်နော်…
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ရန်ကုန် သင်္ကြန်မှာ အပြတ်ကဲဖို့ ALL Day မဏ္ဍပ်လက်မှတ်လေးကို ကံစမ်းလိုက်တော့နော်…
April (6) ရက်နေ့မှာ မဏ္ဍပ်လက်မှတ်ကံထူးရှင်တွေကို ကြေညာပေးသွားမှာပါ… ကံထူးသူရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း လက်မှတ်တွေ Early Bird ဝယ်လို့ရအောင် ဈေးနှုန်းလေးတွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်…
➡ Early bird
Hermes >> All days (50,000 MMK)
Poseidon >> All days (100,000 MMK)
Zeus >> All Day5Persons (800,000 MMK)
နေရာလေးကတော့ ခြံအမှတ် (54) , ပြည်လမ်း မှာပါ…
Phone: ‎‎09955102622 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်…
ဂီတမှာ အမျိုးအစားတွေအများကြီး ကွဲပြားပေမယ့် ဂီတအမျိုးအစားတိုင်းမှာ သူ့ပရိသတ်နဲ့သူရှိကြသလို ဂီတသမားတွေမှာလည်း သူ့ပရိသတ်နဲ့သူ ရှိကြတာပေါ့…
ဘယ်လိုပဲကွဲပြားပါစေ …. လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်
တစ်ခုထဲကို အားလုံးကဝိုင်းကြိုက်ဖို့မလိုသလို သူကြိုက်တာကိုလဲ ကိုယ်လိုက်ကြိုက်ဖို့မလိုပါဘူး
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ သူငယ်ချင်းတွေက ဆွဲဆောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်မယ်၊ ကဲမယ် ဆိုရင် ကိုယ် crazy ဖြစ်တဲ့ ဂီတ၊ ကိုယ်အားပေးတဲ့ Artist တွေရှိတဲ့နေရာကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ကြပါ၊ ကဲကြပါနော်… 🤗 🤗
2nd American Trade Show 2018 Yangon
Sunday’s Latin Affair May 31, 2019
Heads up! Come and enjoy our Sunday’s Latin Affair at Rose Garden Hotel Yangon to be held on 2nd of June 2019 from 11:30 am until 4:00 pm. We will bring you toaunique experience of having not just about food but also about dance. A little bit of everything, you will find with […]
Kelvin’s Pool Bar May 31, 2019
Kelvin’s Bar ကိုလာတဲ့ ချစ်Customers အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့နည်းလမ်းက အမြဲပေါက်ကွဲထွက်နေတဲ့ DJ Music တွေပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ Unplugged Band ဖျော်ဖြေမှုအောက်မှာ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာတေးဂီတတွေကြောင့်လည်း ပျော်ရွှင်စေနိုင်မှာပါ။ Barပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ နာမည်ရပြီးသား XIIX Bandက ဒီ 1st June စနေညမှာ 9pm မှ 11pm အထိ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ပေါ်ဦးရေ သူ့ချည်းပဲလားဆိုတော့Beer Buffet လေးနဲ့ပါ ဘုရားပေါ့။ တစ်ယောက်မှတစ်သောင်းကျပ်ထည်းဖြင့် Heineken စည်ဘီယာ တဝ မော့ရင်း Unplugged သီချင်းတွေ နဲ့ Chill ကြမယ်။(ဒီညမှာ Beer Buffet အချိန်ကတော့ ည၈နာရီမှ၁၀နာရီ အထိပဲနော်) အရှိန်ရသွားပြီ ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းချိန်တွေကို Kelvin’s Resident Dj […]
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဈေးကွက်ကဏ္ဍအတွင်း Influencer များအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်ရှိနေ
Samsung ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ် QLED TV အသစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂုဏ်ယူစွာမိတ်ဆက်
ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားနှင့် လိုက်ဖက်သည်ဟု မြန်မာ လက်ဝှေ့ကျော် သပြေညို ယုံကြည်
© 2019 Amazingyangon. All rights reserved. Created by Amazingyangon